Sida loo kaabta Samsung Galaxy S4
> Resource > Samsung > 3 Hababka in kaabta Samsung Galaxy S4
Hi oo dhan, waxaan ahay cusub si ay Android oo kaliya la casriyeeyay si S4 Galaxy. Su'aashaydu waa sida mid ka dhigaysa gurmad ah oo ka mid ah telefoon oo haddii qof uu doonayo in uu sameeyo nidaam soo celiyo. Waxaan lahaa iPhone iyo qabanayaan ilaa dib u ahaa mid fudud sida kaliya deeruhu telefoonka galay Lugood. Ma jiraa software desktop Galaxy taasi la mid ah Lugood, taas oo iga siin kara Doorashadan? Waxaan doonayaa lahaa farriimaha, barnaamijyadooda, goobaha, oo asal ahaan wax walba xoojiyaa. Thanks ka hor.
Haa, waxaa jira qaar ka mid ah software desktop Lugood-sida oo aad awoodo barnaamijyadooda gurmad, farriimo xiriir, iyo in ka badan oo ku saabsan Samsung Galaxy S4 si fudud. No arrinta haddii aad rabto in gurmad Samsung Galaxy S4 in computer ama telefoon kale, waxaad ka heli kartaa ugu fiican mid aad u. Ka sokow software-ka, kartaan waxaad sidoo kale gurmad phone si account daruurta la software no a. Qaybta soo socda waxa uu kuu sheegi 3 qaybood oo ku saabsan sida loo sameeyo gurmad ah.
Qaybta 1. kaabta Galaxy S4 u computer
Qaybta 2. kaabta S4 in kale phone / kiniin
Qaybta 3. kaabta Samsung S4 in account Google
Qaybta 1. kaabta Galaxy S4 in kombiyuutarka
The MobileGo Wondershare waa tababare Android desktop awood badan. Sidaa daraadeed, awoodo aad gurmad music, SMS, sawiro, videos, barnaamijyadooda, abuse wac, jadwalka taariikhda, xiriirada iyo playlists info aad Galaxy S4 in kombiyuutarka la mid click. Download iyo rakibi version maxkamad free on your computer, oo raac talaabooyinka si aad u barato sida loo kaabta Galaxy S4.
Tallaabada 1. Isku aad Samsung Galaxy S4 in PC via WiFi / cable USB
Burcad Tababaraha this Android oo xirmaan Samsung Galaxy S4 in PC via WiFi ama adigoo isticmaalaya cable USB ah. Ka dib markii ay si guul leh u baadhayaan, taas Tababaraha Android muujiyaan doonaa Samsung Galaxy S4 in ay suuqa kala hoose.
Fiiro gaar ah: Si aad u gurmad Galaxy S4 in PC ka badan WiFi, waxaad u baahan tahay in aad hubiso in aad ku rakibtay app MobileGo aad Samsung Galaxy S4. Haddii aan, fadlan kala soo bixi iyo rakibi app MobileGo halkan . Markaas, isticmaali app MobileGo in ay lambarka sirta QR ee MobileGo desktop-ka si aad u hesho Samsung S4 ku xiran in ka badan WiFi .
Tallaabada 2. Galaxy S4 gurmad
In uu furmo suuqa hoose, guji kaabta One-Click si ay u muujiyaan suuqa kala gurmad. By default, dhammaan waxyaabaha aad awoodo gurmad waxaa lagu saxay. Uncheck ka kooban aan la rabin. Markaas, doorato meel halkaas oo aad jeceshahay in aad badbaadin file gurmad ah. Riix Back Up aad u bilowdo hawsha gurmad.
Maalin maalmaha ka mid, haddii aad lumiso xogta ku saabsan Samsung Galaxy S4, waxaad u soo celin kartaa adigoo gujinaya Super Qalabka > Soo Celinta . Marka aan sidaa yeelno, waxaad ka heli kartaa macluumaadka dib si dhakhso ah.
Hoos waxaa ku tutorial video ah
Qaybta 2. kaabta S4 in phone kale / kiniin ah
Haddii sababta aad samayn gurmad Samsung S4 waa in aad ka heli tilifoon oo kale ama kiniin ah, waxaad u tagi kartaa in ay Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac caawimaad. Sida qalab desktop kala iibsiga phone xirfad, waxay u saamaxdaa in xogta gurmad, sida xidhiidhka ka dhexeeya telefoonada iyo kiniiniyada in waddaa Android, Symbian iyo macruufka la mid click. Sidaa awgeed, waa mid wax tar leh marka aad go'aansato in aad xog gurmad ka Samsung Galaxy S4 in qalab kale.
Download qalab iyo bartaan sida loo raad raac Samsung Galaxy S4
Tallaabada 1. Connect Galaxy S4 iyo qalab kale si ay PC
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan Galaxy S4 iyo qalab kale si ay PC labadaba. Isla markiiba, qalabka aad la ogaan doonaa oo la aqoonsan yahay. Markaas, furmo suuqa ugu weyn, oo waxaad arki doontaan laba qalabka saxda ah waxaa.
Tan iyo waxyaabaha aad awoodo gurmad ku salaysan yihiin nidaamyada hawlgalka qalab Ahaado ah, hubi inaad si fiican u lahaa waxyaabaha uu taageeray hoos ku qoran.
Galaxy S4 in aalad Android: xiriirada, jadwalka taariikhda, music, barnaamijyadooda, sawiro, abuse wac, video iyo farriimo Galaxy S4 in iDevice ah: farriimaha, jadwalka taariikhda, music, sawiro, xiriirada iyo videos Galaxy S4 in Symbian (Nokia) qalab: xiriirada
Fiiro gaar ah: Sax ku calaamadee sanduuqa ka hor xogta oo cad ka hor inta nuqul marka aad dooneyso in aad ka saarto xogta ku saabsan qalab caga si loo badbaadiyo kuwa u dhigma ka Samsung Galaxy S4.
Tallaabada 2. S4 gurmad si iDevice qalab / Android / Symbian
Hubi waxyaabaha ku saxday waa kuwa aad ku socoto in gurmad. Guji Start Copy . Ha xusuusan in barkinta qalab ka hor habka dhamaato.
Haddii aad leedahay xisaab Google ah Samsung S4, ma badbaadin wax walba? Ma aha wax kasta, laakiin aad awoodo gurmad Samsung Galaxy S4 WiFi Passwords, xogta app, goobaha. Raac tallaabooyinka hoose.
Tubada Goobta > Accounts > kaabta iyo dib . Markaas, sax Back up aan taariikhda . Tani doono xog gurmad app, sirta WiFi, iyo goobaha in server Google.
Fiiro gaar ah: Fadlan saxiix in aad Google account aad Samsung S4.